September 10, 2021 - समृद्ध नेपाल
मलाई जति गरेनी पुग्दैन झन् गर्नु मन लाग्छ !
म संग साथी बन्ने भए मलाई सम्पर्क गर्नु होला !
लाइसेन्सको आवेदन खुल्यो, परीक्षा मंसिर ११ गते !
बंगलादेशमा दुर्गा पूजामा हिन्दूमाथि ह’मलाः धार्मिक हिं’सा भड्किन नदिन सुरक्षाकर्मी हाइ अलर्टमा !
विहेमा रमाइरहेका युवा माथि अन्धाधुन्दा आक्रमण, ४ जना भने अस्पताल भर्ना !
प्रेमिकालाई पानी मुनी गएर विवाह प्रस्ताव राख्न खोज्दा प्रेमी ठहरै !
घानाका युवक र नेपाली चेलि बुढाबुढिले यसरी मनाए दशै !
२९ बर्षीया बिधुवा महिलाले १४ बर्षे किशोरको गर्भ बोकेपछि !
हातखुट्टामा मुसा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यस्तो छ घरेलु उपचार विधि चाडै निको हुन्छ !
आज आइतबार सुप्पा देउरालीको दर्सन गरि तपाइको राशिफल पढ्नुहोस !
हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका अनौठा कुरा सुन्न र देख्न पाइन्छ। कुनै कुनै कुरा त यति अचम्म हुन्छ कि सुन्दा पनि हास्नु कि चकित हुनु मानिस अलमलमा पर्छ। पछिल्ला दिनहरुमा समाजमा हरेक दिन नयाँ र फरक कर्महरु भइरहेका हुन्छन् ।जुन कुरा सुन्दा हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्त तर ति वास्तवमैं सत्य हुन्छन् । यस्तैं एउटा कुरा
प्रेमीले अर्कै युवती बिहे गर्न लागेको खबर सुनेपछी प्रेमीलाई होटलमा भेट्न बोलाएर लि’ङ्ग का’टि’दिईन
मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा एक युवतीले प्रेमीको लि’ङ्ग का’टिदिएकी छन् सुनसरीको ब’र्जु गाउँपालिका–२ घर भइ विराटनगर मा डेरा गरी बस्दै आएकी २८ वर्षीया युवतीले २७ वर्षीय प्रेमीको लि’ङ्ग का’टि’दि’एकी हुन् । विराटनगर–१५ रानीस्थित होटल मकालुमा भेट्न बोलाएर लि’ङ्ग युवतीले कै’चीले प्रेमीको लि’ङ्ग का’टि’दिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार होटलमा लगेर ज,’ ब’र,’ ज,’ स्ती
मेरो किन यति धेरै चिलको होला !
पाली चलचित्र उधोगमा अभिनेत्रीहरुको धेरै चर्चा हुने गर्छ । अभिनयको चर्चा भन्दा पनि उनिहरुको अनेक गतिविधि र हर्कतका कुराहरुले मिडिया र सामाजिक संजाल तातिन्छ । यतिबेला प्रायः अभिनेत्रीहरु शान्त छन् वा भनौ आफ्नै घरायसी काममै ब्यस्त छन, कारण चलचित्र क्षेत्रमा अझै पनि काम गर्ने सहज वातावरण बनिसकेको छैन । तर, अभिनेत्री पुजा शर्मा भने चर्चा
सवारीसाधनले छुट्टै टयांकी जडान गरी नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थ भारत लैजाने गरेको घटना सार्वजनिक
भारतबाट नेपाल आउने मालवाहक सवारीसाधनले छुट्टै टयांकी जडान गरी नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थ भारत लैजाने गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी गर्ने नयाँ शैली पत्ता लागेको हो । काँकडभिट्टा नाकाबाट सोमबार बिहान ९ बजे नेपाली वस्तु ढुवानीका लागि भारतीय नम्बर प्लेटको डब्लुबी ७४ डी २४४१ नम्बरको खाली मिनी ट्रक नेपाल प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि